कलंकी–कोटेश्वर सडकमा त्रुटि नै त्रुटि, सच्याउने कसरी ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
कलंकी–कोटेश्वर सडकमा त्रुटि नै त्रुटि, सच्याउने कसरी ? (भिडियो)
काठमाडौँ । चक्रपथको कोटेश्वर–सातदोबाटो–कलंकी सडकखण्ड पुग्ने धेरैलाई लाग्छ, सडक होस् त यस्तो । विकासको नमूना मान्न लायक छ सडक । तर, बनिसक्दा मात्रै बहस सुरु भयो– काठमाडौं उपत्यकालाई चाहिएको चक्रपथ यस्तै थियो त ?
सडक ईञ्जिनियरका अनुसार चक्रपथलाई ‘सिटी–वे’ बनाउनु पर्नेमा बनाइयो ‘एक्सप्रेस–वे’ । नेपालले नै ‘एक्सप्रेस–वे’ भनेका कारण चीनले त्यहीअनुसार डिजाइन गरेर सडक बनाइदियो ।
‘एक्सप्रेस–वे’ मा ‘सिटी–वे’का जस्ता पूर्वाधार खोजेर काहाँ पाइन्छ त ? स्तरोन्नतीपछि आकर्षक देखिएको आठ लेनको कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डलाई तीन भागमा बाँडिएको छ । बीचमा चार लेनको द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस–वे) छ । जहाँ ५० किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा सवारी साधन चल्छन् । दायाँ–बायाँ दुई–दुई लेनका सहायक लेनमा २० किलोमिटर प्रतिघन्टाको गति हुनुपर्छ । त्यसपछि दुवैतर्फ सर्भिस लेन छ ।
मुख्य लेन ५० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउन मिल्ने गरी बनाइएको छ, जुन ‘सिटी–वे’का लागि धेरै हो । करिब १० किलोमिटरमा जम्मा तीन वटा मात्र आकाशे पुल छ । आकाशे पुलबाट सडक पार गर्न करिब तीन किलोमिटर हिड्नु पर्छ । यस्ता अरु पनि धेरै प्राविधिक त्रुटी छन् । जसका कारण चक्रपथले सहरबासीका लागि थुप्रै असुविधा थपेको छ ।
चिनियाँ लगानी र प्राबिधिकले बनाएको कोटेश्वर–कलंकी सडक चिनियाँ शैलिमा नै बनेको छ । सांघाइ कम्पनीले पनि सम्झौता र डिजाईनअनुसार नै सडक निर्माण गरेको हो । सडक निकै बलियो र उत्कृष्ट पनि बनेको छ । तर पनि सडकमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वाधार नहुनुमा चिनियाँ पक्षको दोष देखिदैन ।
दोष देखिन्छ त नेपाली पक्षको । जसले मध्य सहरमा ‘एक्सप्रेस–वे’ को डिजाइन स्वीकृत गरे । सडक सञ्चालनको दायित्व नेपालमै आइसकेकाले अत्यावश्यक पूर्वाधार थपेर सुरक्षित बनाउने दायित्व सरकारकै हो । बेलैमा सचेत भएको भए चीनले नै सडक ‘सिटी–वे’अनुसारको पूर्वाधार युक्त बनाइदिन्थ्यो नै होला ।
बेला घर्किएपछि कोकोहोलो गरेर पनि केही हुँदैन । अत्यावश्यक पूर्वाधार थपेर कलंकी–कोटेश्वरलाई सुरक्षित बनाउन र कलंकी–चावहिल खण्डमा त्रुटी नदोहो¥याउन सरकारको ध्यान जाओस् ।
सुनिएअनुसार चीनले कलंकी–चावहिल खण्डको डिजाइन पनि ‘एक्सप्रेस–वे’कै रुपमा गरेको छ । त्यो नसच्याउने हो भने २७ किलोमिटर हाराहारीको चक्रपथ मृत्युमार्गमै परिणत हुने छ ।